Vaovao Mafana · Febroary, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Febroary, 2018
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Febroary, 2018
Japana: Niverina Ny Hetran'ny Solika
Azia Atsinanana 27 Febroary 2018
Tafaverina indray ilay hetra "vonjimaikan'ny" solika any Japana, 25 yen isaky ny litatry ny solika, nohalavaina nandritra ny 30 taona ary namatsiana fandaharan'asa fanamboarana làlana 5000 eo ho eo, taorian'ny ady nifanaovana tamin'ny mpanohitra, ary tsy nankasitraka izany ny olona. Tantaran'ny zavatra niainany tamin'ny fanandramana hameno ny fitoeran-tsolikany teny amin'ny toby fitsinjaràna solika tamin'ny andro farany nialoha ny fiakaran'ny vidin'ny solika ny voalohan'ny volana May.
Serbia : Voasivana Hatramin'ny Fahatsiarovana Ny Maty Avoaka Anaty Gazety
Eoropa Afovoany & Atsinanana 22 Febroary 2018
Nosivanin'ny gazety serbiana iray ny toerana nisy ny lahatsoratra fahatsiarovana ilay mpanakanto mpanao sary. Voalaza fa boky momba ny sivana no iray amin'ny asany farany.
Arahabaina Ireo Mpandresy Tamin'ny Bilaogin'ny Fahalalahana RSF!
Mediam-bahoaka 14 Febroary 2018
Nanambara ireo mpandresy tamin'ny Fifaninanana Bilaogin'ny Fahalalahana izay natao tao anatin'ny 2 volana ny Reporters Sans Frontieres.
Nosarahan'ny fandrendreham-bahoaka, Miomana Amin'ny Fifidianana Filoham-pirenena Fihodinana Faharoa ny Fiaraha-monina Tsheky
Eoropa Afovoany & Atsinanana 09 Febroary 2018
Niteraka adihevitra mafana teo amin'ny olom-pirenena na antserasera na andavanandro ny fifidianana. Amin'ny maha-repoblika parlemantera, dia voafetra tanteraka ny fahefana mpanatanteraky ny filoha, nefa efa mampisara-bazana ny firenena ilay fifidianana.
Kolombià: Miteraka Ahiahy Ny Fanavotana Takalonaina
Amerika Latina 06 Febroary 2018
Taorian'ilay fanavotana nolazain'ilay mpirotsaka hofidiana ho filohampirenena fahiny, Ingrid Betancourt hoe 'tsy nisy tomika', takalonaina navotan'ny tafika kolombiàna tamin'ny Alarobia 2 Jolay 2008 niaraka taminà 14 hafa notazonin'ny Tafika Revolisionera Mitampiadiana ao Kolombià (FARC), efa ho 10 taona mahery ny an'ny sasany, nilaza ny ahiahiny ny vondrom-piarahamonina kolombiàna momba ny ho fiantraikan'ilay fanavotana, sy ireo tombontsoa mety ho tao ambadik'izy iny.
Maraoka: Navotsotra Vonjimaika i Mohammed Erraji
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 01 Febroary 2018
Androany, nifaly ireo Maraokana noho ny vaovao fa navotsotra vonjimaika i Mohammed Erraji, bilaogera nosamborina sy nogadraina avy hatrany. Saingy vetivety ihany ny fifaliana, satria niresaka momba ny rafitra mikorotana mikasika izany sy ny fotoam-pitsarana manaraka an'i Erraji ny bilaogera.
Siria: 25 No Maty Tao Amin'ny Fonjan'i Sednaya
Syria 01 Febroary 2018
Miangavy ny filoham-pirenena siriana ny fianakavian'ireo gadra mba hanatsahatra io fombam-biby tsy fampiasa amin'ireo olona tsy mitam-piadiana io ary te-hahalala izay nanjo ireo havany.